Faa'iidada Laga Helo Shaaha Liinta Leh - Awdinle Online
December 1, 2019 (AO) – Shahaa liinta leh ayaa kordhiya awood sunsaarista “Anti-oxidant”, tan oo jirka ku caawiso siduu isaga saari lahaa wixii aan nacfi ugu jirin, waxyaabahaan oo halis ku ah caafimaadka wadnaha iyo dadka qabo macaanka.
– WUXUU DAAWO U YAHAY HARGABKA
Shaah liin ta leh wuxuu ka caawiyaa yareynta astaamaha hargabka,
Wuxuuna sidoo kale kuu kordhinayaa nidaamka jirkaada, sidoo kale hadii aad maalinkii 3 ama 2 jeer joogteyso waxaa meesha ka baxaya calaamadihii hargabka oo dhan.
– WUXUU YAREYNAYAA STRESS KA AMA WELWELKA.
Shaah liinta leh wuxuu ka saaraa sunta dhiigga, oo markaa, wuxuu jirkaaga siiyaa awood, maskaxdaada ayuu dhiiri galiyaa si ay ugu raaxaysato howsha ay qabanayso,
Wuxuuna meesha kasaaraa walaaca iyo fakarka xanuunka ah.
– WUXUU KA HORTAG U YAHAY CUDURADA WADNAHA.
Shaah liin ta leh wuxuu ka kooban yahay flavonoids oo yareynaysa dufanka-ka iyo caabuqa isla markaana ka hortaga sameynta xinjirowga dhiigga ee halbowlayaasha. Markaa, cabitaanka shaaha liin ta waa hab wanaagsan oo lagula dagaallamo cudurrada wadnaha.
– JEERMISYADA IYO CAABUQYADA AYUU DAAWO U YAHAY.
Sidaan wada ognahay, liin tu waa ka hortag dabiiciga ah. Shaah liin ta leh wuxuu leeyahay astaamaha anti-bakteeriyada iyo fayraska, sidaa darteed, isticmaalka joogtada ahi wuxuu ka caawiyaa daaweynta iyo bogsashada caabuqyada iyo cudurada.
WUXUU CAAWIYAA HABDHISKA DHEEF-SHIIDKA.
Shaah liin ta leh wuxuu fududeeyaa dheefshiidka caafimaadka iyadoo loo marayo saameynta xasilloonida.
Tan waxaa ugu wacan inay baabi’iso sunta iyo waxyaabaha qashinka ah,
waxayna u saamaxaysaa jirkaaga inuu soo nuugo waxyaabo badan oo waxtar leh oo ku jira.
Aashitada ku jirta liinta waxay kaalmaysaa dheefshiidka waxayna caawisaa in la baabi’iyo dhagxaanta kelyaha, halka aashitada loo yaqaan ‘ascorbic acid’ ay tahay antioxidant dabiici ah oo ka hortageysa cabsida.
– XANUUNKA CAADADA DUMARKA AYUU YAREEYAA.
shaaha liin ta leh wuxuu sidoo kale tirtirayaa dhibaatooyinka sunta ah ee suuxdinta wuxuuna yareeyaa xanuunka inta lagu gudajiro caadada dumarka.
– WUXUU KORDHIYAA SHAQADA MAADADA INSULIN.
Jidhkeenu wuxuu u baahan yahay insulin si loogu beddelo gulukooska ama sonkorta tamar. Shaaha waxaa laga helay inuu kordhiyo waxqabadka insulin iyadoo loo eegayo daraasad cilmi baaris ah oo ay sameysay “joornaalka Beeraha iyo Kiimikada Cunnada”, isla faa iidooyinkaasna waxaa bixiya shaah liin ta leh sidoo kale.
FUDUDEEYAA NUUGISTA MAADADA BIRTA AH.
Shaaha kaligiis guud ahaan waxuu hoos u dhigaa nuugista maadada IRON,
Waana sababta dhakhaatiirtu u dhahaan hadiibaad cunto beer ama kelyo haka daba cabin shaah sababto ah wuxuu hor istaagayaa nuugista IRON ta ku jirta beerka iyo kelyaha.
Si kastaba ha noqotee, marka shaaha liinta lagu daro wuxuu yeeshaa fiitamiin C kaas oo xoojin kara nuugista birta hilib-la’aanta. Sidaa darteed, ku darso liin shaahaaga waxay ka hor tagi kartaa saameyntaan xun ee shaaha.
WUXUU TIRTIRAA FINANKA WAJIGA
Kulligeen waan ka warqabnaa waxtarka fitamiin C u leeyahay maqaarka. Liin ayaa leh Fitimiin C badan oo kaa caawinaya yareynta finanka iyo dhibaatooyinka kale ee maqaarka gudaha. Markaa, isticmaalka shaaha liinku wuxuu gacan ka geysan karaa la-dagaallanka finanka iyo xanuunnada kala duwan ee maqaarka.
Shaah iyo liin tu labadaba waxay leeyihiin astaamo antioxidant adag.
Tan waxaa loo aanayn karaa jiritaanka polyphenols-ka shaaha ku jira iyo xaddi badan oo fiitamiin-ah antioxidant-ka ku jira liin dhanaanta.
Daawada antioxidant-ka kaliya kama hortageyso waxyeelada unugyada caafimaadka leh laakiin waxay sidoo kale kor u qaadaan dhimashada unugyada aan caafimaadka qabin waxayna ka hortagaan koritaanka unugyada kansarka.
Astaamaha ka hortagga kansarka ee shaaha liin ta leh waxuu yareeyaa fursadaha kansarka maqaarka. Ka sokow, liin dhanaanyadu waxay ka kooban yihiin maadooyin loo yaqaanno limonoin badan oo ka caawiya la-dagaallanka kansarada ku dhaca afka, sambabka, naaska, iyo caloosha iyo kansarka xiidmaha.
Adigu ma cabi jirtey Shaaha Liinta leh ama ma jeceshahay?
Horey se ma u ogeed hadii aad cabi jirtey faa’iidadaan uu leeyahay?
Hadii aad kaa faa’iideysatey mowduucaan Fadlan gaarsii asxaabtaada oo u SHARE garee ama halkaan ugu wac mid iyo labo.
Qore Dr. Amen
Previous articleNin Gabar Guursaday Oo Lagu Weeraray Faas Iyo Mindiyo
Next articleMADAXWEYNE Laftigareen OO DIB UGU SOO LAABTAY Magaalada Baydhabo:- (Sawiro)